Iska illow Arthur, Barcelona oo ciyaaryahan kale dhaafsaneysa Pjanic, iyo xiddiga qudhiisa oo wada hadallo kula jira Juventus – Gool FM
(Barcelona) 12 Maaajo 2020. Kooxaha kubadda cagta ee Juventus iyo Barcelona ayaa ka wada shaqeynaya heshiis ciyaartoy is dhaafsi ah, kaasoo labada koox ay ku qanci karaan.
Barca ayaa rajeyneysa inay lasoo saxiixato Miralem Pjanic halka Juve ay wada xaajood kula jirto Jean-Clair Todibo oo hadda amaah ugu ciyaaraya kooxda Jarmalka ka dhisan ee Schalke.
Difaacan ayaa lala xiriiriyay horraan kooxo dhowr ah oo Serie A ka ciyaara, Bianconeri ayaana dooneysa inay ka faa’ideysato xirfaddiisa maaddaama uu khadka dhexe iyo difaacaba ka ciyaari karo, xilli Barcelona ay Todibo ku qiimeyso 50 milyan oo euro.
Kooxda Camp Nou ka dhisan ayaa heshiis afar sano ah la gaartay Pjanic, halka De Sciglio ay la gaareen heshiis saddex sano ah, iyadoo difaaca Talyaaniga ah uu noqonayo laacibka labaad ee ay Barca dooneyso inay ka qaadato Juventus.
Qorshaha Juve ee wada xaajoodka Pjanic ayaa ahaa in heshiiska lagu daro Arthur, balse laacibka reer Brazil ayaa caddeeyay rabitaankiisa ku aaddan sii joogista Barca, halka Frenkie de Jong oo ahaa dookha labaad ee kooxda Talyaaniga ay Barcelona diidday.